Làlana Shuangzhu, Road Ganghua atsimo, Tanànan'i Jingang, Tanànan'i Zhangjiagang, Faritanin'i Jiangsu, Sina
Momba ny GRACE
Lamba Meltblown PP
2020 CHINA PLSA Vaovao Ao Nanjing
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-05
4 Novambra, 2020, Andriamatoa PETER FRANZ, Lehiben'ny injenieran'ny Teknolojia ary R&D an'ny Grace, dia nizara fizarana teknolojia mahafinaritra momba ny "Teknolojika mamonjy angovo Frontier sy ny firoboroboan'ny famokarana paipa plastika" tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tao amin'ny Hall 5 an'ny Nanjing International Expo Ce ...
Miresaha amin'ny orinasa Manitowoc kilasy manerantany ary iaraho miresaka momba ny ho avy!
avy amin'ny admin tamin'ny 20-09-04
Ny marainan'ny 3 septambra dia nasaina hitsidika an'i Grace i Andriamatoa Lei Wang, filoha lefitra zon'ny Business Manitowoc Tower Machines Business Mivoatra ary ny filohan'ny Faritra China. Ny roa tonta dia nanana fifanakalozana lalina sy nafana fo amin'ny famokarana mahia amin'ny pabrika mandroso ...
Fanavaozana ara-teknolojia, mamolavola ny ho avy ny plastika!
Tamin'ny faha-3 septambra 2020, niditra an-tsokosoko tamin'i Grace Machinary ny injeniera zokiny Mr.PETER FRANZ avy any Alemana. Miaraka amin'ny traikefa 37 taona momba ny teknolojia R&D momba ny fitrandrahana plastika ary ny fitantanana ny endrika, Mr. Peter FRANZ dia nanompo tao amin'ny R&D ary mpitantana ny varotra DROSSBACH (Alemana), toy ny tale jeneralin'ny Batten ...
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-20
Vao tsy ela akory izay, ny tsipika famokarana fantsom-pamokarana 1600mmPE dia natomboka tamim-pahombiazana tao amin'ny tranokalan'ny mpanjifa ary nihazakazaka tamim-paharetana. Ny mpanjifa dia niresaka fatratra ny amin'ny fahombiazana sy ny maha matihanina an'ireo injenieran'ny komisiona an'i Grace! Nandritra ny taona maro niainana azo tsapain-tanana, Grace nivelatra sy p ...
GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Lines dia ankatoavin'ny State Company for Construction Industries (SCCI) / Ministeran'ny Indostrian'ny Mineraly any Irak
avy amin'ny admin tamin'ny 20-07-07
Miarahaba anao! GRACE 630mm & 1200mm PE Pipe Extrusion Lines dia ankatoavin'ny State Company for Construction Industries (SCCI) / Ministeran'ny Indostria Mineraly any Iràka! Tetikasa lehibe iray an'ny Ministeran'ny Indostria ao Iràka izany. Andriamatoa Manhal Aziz Al Khabaz, minisitry ny minisiter ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-02-28
Fampidirana fampirantiana: INTERPLASTICA dia tohanan'ny Dusseldorf Exhibition Company, orinasa fampiratiana alemanina malaza amin'ny indostrian'ny fampirantiana plastika, ary tohanan'ny Ministeran'ny Indostria sy ny angovo an'ny governemanta federaly rosiana, ny minisiteran'ny Fanabeazam-pirenena ary ny Scie .. .
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-01-21
Momba ny fampirantiana The Egypt International Plastics Industry Exhibition (PLASTEX) dia natsangana tamin'ny taona 1993 ary nampiantranoin'ny ACG-ITF, mpikarakara fampirantiana lehibe indrindra any Afrika-Moyen Orient, ary nahazo fanampiana matanjaka avy amin'ny fikambanana indostrian'ny plastika eo an-toerana. Io no lehibe indrindra ao ...
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 19-10-16
Ny mpanjifa any ivelany dia namboarina 630-1200mm HDPE fantsom-pamokarana extrusion fantsom-pamokarana dia nahomby tamina hazakazaka tamina atrikasa GRACE! Extruder: manara-maso fanaraha-maso dosing metatra misintona, sikina haingam-pandeha avo lenta sy barika, boaty fitaovana Siemens mavesatra mavesatra be; Taratasy fanamafisam-peo: mampiasa takelaka misy nylon, ...
Miarahaba anao amin'ny fiaraha-miasa stratika GRACE miaraka amin'ny OPW
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-12-25
Manaiky ny hanolo-tena amin'ny fiaraha-miasa lalina amin'ny sehatry ny fitrandrahana plastika ny ankolafy rehetra, indrindra amin'ny fampandrosoana ny milina manokana. Tokony ho tsikaritra fa ny GRACE dia nanjary hany kaoperativa extrusion plastika sinoa pa ...
315-800mm HDPE Pipe Extrusion
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-12-21
Fotoana kely taorian'ny Fetin'ny Lohataona Sinoa, ny ekipa injenieran'ny debugging Grace dia nirotsaka tamin'ny debugging tanteraka. Vao tsy ela akory izay dia nandeha tany Iran ny injenieran'ny fanalefahana vola Andriamatoa Wang Lei noho ny fahombiazan'ny fandefasana deba sy fandefasana ny tsipika famokarana fantsona OD800mm PE 3 sosona. Mpanjifa ...
Fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny milina GRACE miaraka amin'ny Radius Systems
Vao tsy ela akory izay, nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa stratejika miaraka amin'i Radius Systems i Grace. Ny fiaraha-miasa stratejika dia tratra niaraka tamin'ny tanjona hamolavola fiaraha-miasa lalindalina amin'ny sehatry ny fanodinana plastika, miaraka amin'ireo teknolojia vaovao manatsara hatrany ny fampandrosoana ny indostria. Amin'ny maha mpanamboatra azy ...
Fiaraha-miasa stratejika amin'ny OPW
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 18-11-21
Manaiky ny hanolo-tena amin'ny fiaraha-miasa lalina amin'ny sehatry ny fitrandrahana plastika ny ankolafy rehetra, indrindra amin'ny fampandrosoana ny milina manokana. Tokony ho tsikaritra fa ny GRACE no hany mpiara-miasa amin'ny milina fitrandrahana plastika sinoa ao amin'ny orinasa OPW manerantany. Faly izahay mizara aminareo fa G ...
Mifantoka amin'ny sehatry ny famokarana plastika sy fanodinana fitaovana, GRACE dia mpamatsy fitaovana fampidirana endrika, R&D, famokarana, varotra ary serivisy.